यि नायिकाले किन लगाइन् टाउकोदेखि गोडासम्म छोपिएको पहिरन ? यस्तो छ सबै चकित हुने रहस्य - Khabar Nepali
होमपेज / मनोरञ्जन / यि नायिकाले किन लगाइन् टाउकोदेखि गोडासम्म छोपिएको पहिरन ? यस्तो छ सबै चकित हुने रहस्य
यि नायिकाले किन लगाइन् टाउकोदेखि गोडासम्म छोपिएको पहिरन ? यस्तो छ सबै चकित हुने रहस्य
हलिउडकी चर्चित अभिनेत्री हुन् किम कार्दशियन । धेरैजसो हट फोटोशुटका कारण चर्चामा आइरहने किम पछिल्लो समय नौलो कपडाका कारण चर्चामा छिन् । पछिल्लो समय उनी टाउकोदेखि गोडासम्म लेदरको कपडा लगाएर चर्चामा आएकी छिन् । उनले लगाएको टाउकोदेखि गोडासम्मको कपडा देखेर फ्यानहरु पनि चकित परेका छन् । उनले लगाएको कपडा धेरैको लागि नौलो हो । टाउकोदेखि गोडासम्म लेदरबाट बनेका आउटफिट लगाएर हिडिरहेकी उनमा सबैको ध्यान गयो । नौलो पहिरनमा न्युयोर्क पुगेकी उनलाई धेरैले चिनेनन् पनि ।